तपाईंको स्मार्टफोनलाई एक दिन रोबोटले विस्थापित गर्नेछ – Latest News from around the world, nepal news, breaking news, latest news, US today, Nepal today, India today
एक दिन हामी सबैसँग स्मार्टफोनको सट्टा रोबोट हुनेछ।
जीवितजस्तो देखिने ड्रोइडले तपाईंलाई अनेकौँ विषयमा सल्लाह दिनेछ। सामान किन्न सहयोग गर्नेछ र तपाईंले चाहेअनुसार कफी पनि बनाइदिनेछ।
गत साता क्यालिफोर्नियाको पेबेल बिचमा भविष्यबारे छलफल गर्न भेला भएका रोबोटिक्स र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका ज्ञाताहरुले यही भविष्यवाणी गरे। सो जि–कन्फेरेन्सको आयोजना जिडब्लुसीले गरेको थियो।
सम्मेलनमा उपस्थित वैज्ञानिक तथा अनुसन्धाताहरुको समूहले रोबोटिक्सको क्षेत्रमा हालै प्राप्त गरिएका सफलताहरुको प्रशंसा गर्‍यो। त्यस्तै वर्तमानका रोबोट नमुनाहरुको कमजोरीलाई पनि आत्मसात गर्‍यो।
‘धेरै मानिसहरु सी–३पिओ (स्टार वार फिल्म सिरिजमा रहेको बुद्धिमान रोबोट) चाहन्छन्, तर अहिले नै त्यसको चाहना राख्ने हो भने तपाईं निराश हुनुहुनेछ,’ सफ्टब्यांक रोबोटिक्स अमेरिकाका प्रमुख रणनीतिक अधिकारी स्टिभ कार्लिन भन्छन्। सो कम्पनीले ४ फिट अग्लो ‘पेप्पर’ रोबोट बनाउने गर्छ। पेप्पर सर्वप्रथम मानिससँग बस्न र सञ्चार गर्नसक्ने गरी डिजाइन गरिएको रोबोट हो।
पेप्पर केही काममा सिपालु हुन्छ। उदाहरणका लागि ऊ मानिसको फरकफरक अनुहार पहिचान गर्न सक्छ र पिज्जा हटमा बसेर ग्राहकलाई स्वागत गर्न सक्छ। तर आफूखुसी सडकमा घुम्न जान सक्दैन। त्यस्तै बोस्टन डाइनामिक्सले विकास गरेको रोबोट भर्‍याङ चढ्न र हिउँमा हिँड्न त सक्छ तर ती ड्रोइडसँग राती अबेर जागै बसेर जीन्दगीको अर्थबारे गफ गर्ने आशा राख्न सकिन्न। उता अमेजन रोबोटिक्सले बनाएको मेसिनले गोदामघरमा यताको सामान उता सार्न सक्छ। तर त्यसको खुबी भनेको त्यही एउटा काम गर्नसक्नु मात्रै हो।
त्यसोभए आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा रोबोटिक्सका हस्तीहरुलाई एक दिन सि–३पिओ बनाउन सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास के ले दिएको छ त?
यसको उत्तर तपाईंको हातमा छ। अझ भनौँ तपाईंको हातमा भएको स्मार्टफोनमा यसको जवाफ छ।
स्मार्टफोन फरकफरक प्रविधिको संयोजन हो। त्यसमा प्रयुक्त सबै प्रविधि अलगअलग तरिकाले र आफ्नै समयमा विकसित भएका थिए। अन्ततः सबै खालका प्रविधि परिपक्व र विश्वसनीय भए ताकि तिनलाई एकै ठाउँमा मिसाउन सकियोस्। त्यसबेला स्मार्टफोनको जन्म भयो।
रोबोट पनि यसभन्दा फरक छैन। निश्चय नै यो पनि निकै जटिल र फरक खालको प्रविधिहरुको संयोजन हो। यसमा आवाज पहिचान, भिजुअल कम्प्युटिङ र मेकानिकल इन्जिनियरिङ पनि सामेल हुन्छ। ‘जुनबेला यी सबै तत्वहरु परिपक्व हुन्छन्, तिनलाई संयोजन गरेर सि–३पिओजस्तै एक ‘सार्वभौम’ रोबोट बनाउन सकिन्छ,’ ग्रिसिन रोबोटिक्सका सिइओ दिमित्री ग्रिसिन भन्छन्।
यद्यपि ‘सार्वभौम रोबोट’ निर्माणको कुन कालखण्डमा हामी छौँ भन्ने कुरा ग्रिसिन बताउँदैनन्।
तर तपाईंको स्मार्टफोनमा रहेका अलगअलग तत्व कहिले विकसित भएका थिए भन्ने कुरा हेर्ने हो भने यो प्रक्रियाले कति लामो समय लिन सक्छ भन्ने कुराको आभाष हामी पाउन सक्छौँः
पहिलो रेडियो ट्रान्समिटरको आविष्कार १८८७ मा भएको थियो।
पहिलो कमर्सियल फोटोग्राफिक क्यामरा १८३९ मा बनेको थियो।
आजको डिजिटल डिस्प्लेको आधार क्याथोड रे पहिलो पटक १८९७ मा बनेको थियो।
पहिलो पटक एकीकृत सर्किट १९४९ मा बनाइएको थियो।
स्मार्टफोनमा यी बाहेक अन्य तत्व पनि हुन्छन्। तर सन् २००७ मा आइफोन निर्माण हुनुभन्दा करिब १०० वर्षअगाडि यसका आधारभूत प्रविधिको विकास भएको थियो।
के यसको अर्थ हामी अझै साइन्स फिक्सनमा देखाइने रोबोट प्राप्त गर्नुभन्दा १०० वर्ष पछि छौँ भन्ने हो त? ठ्याक्कै त्यस्तो होइन। प्रविधि विकासको गति तीव्र भएको छ र प्रत्येक नयाँ आविष्कारसँगै यसको गति अझ तीव्र हुँदै जान्छ।
राम्रो समाचार के हो भने तपाईंको सर्वगुणसम्पन्न र अत्याधिक बुद्धिमान सि–३पिओ रोबोट आउँदैछ। तर अहिले नै तपाईं आफ्नो स्मार्टफोन मिल्काइनहाल्नोस्।
(२७ अगस्टमा बिजनेस इनसाइडरमा प्रकाशित आलेखको भावानुवाद)